अभ्यास खेलमा नेपाललाई लगातार सफलता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अभ्यास खेलमा नेपाललाई लगातार सफलता
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेलमा लगातार तेस्रो सफलता प्राप्त गरेको छ । चेन्नईमा आज भएको खेलमा नेपाली टोलीले आज तामिलनाडु ए लाई १ सय ४७ रनको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो । शरद भेषावकरको शतक बनाएको खेलमा नेपाली टोलीले ३ सय ११ रन बनाएको थियो । जवाफमा तामिलनाडुलाई नेपालले ४५.३ ओभरमा अलआउट गर्दै १ सय ६४ रनमा सिमित गरेको थियो ।
३ सय १२ रनको ठूलो लक्ष्य पछ्याएको तामिलनाडुलाई सस्तैमा आउट गर्ने क्रममा सन्दिप लामिछाने र सुशील कंडेलले समान ३ विकेट लिए । करण केसी , सागर पुन र ललित भण्डारीले समान १ विकेट लिए । तामिलनाडुका सत्यनारायणले ६७ रन बनाए । अन्य ब्याट्सम्यान खासै चल्न सकेनन् ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै ३ सय ११ रन बनाएको थियो । शरदले १ सय रन बनाउँदै आउट भए । सागरले ७७ रन बनाए । शरद र सागर पुनले दोस्रो विकेटका लागि १ सय ४७ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए ।
अघिल्लो खेलमा शतक बनाएका ज्ञानेन्द्र मल्लले ३१ रन जोेडे । ३७ बल खेलेका दीपेन्द्र सिंह ऐरीले बिष्फोटक ब्याटिङ गर्दै ८ चौका र ४ छक्काको मद्दतले ७३ रन बनाए । खराब ब्याटिङलाई निरन्तरता दिएका विकेट किपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारीले ७ रन जोडे । इनिङ्सको अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गरेका सोमपाल १० रनमा नट आउट रहे ।
यसै महिनाको अन्तिममा विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत हङकङसँग हुने दुई खेलको अन्तिम तयारीका लागि नेपाली टोली भारत भ्रमणमा रहेको छ । नेपालले चौथो तथा अन्तिम अभ्यास खेल सोमबार खेल्नेछ । नेपाल र हङकङबीच असोज २७ र २९ गते हङकङमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
विश्वकप उपाधि फ्रान्सलाई, कुन खेलाडीले के पाए ?
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको इतिहाँस दोहोर्याउँदै फ्...
यस्तो हुँदैछ फुटबल फाइनल, कसले बाजी मार्ला ?
काठमाडौं । फुटबल प्रेमीहरुका लागि आजको दिन निकै च...
पहिलो पटक इतिहाँस रच्ने दाउमा क्रोएसिया
काठमाडौं । क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवे...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाद्वारा आयो...